Ngaphezulu kweempawu ezingama-46 (iipateni) ezisimahla zokukhuphela kunye nokusetyenziswa kwiFotohop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngaphezulu kweempawu ezingama-46 zamahhala (iipateni) zokukhuphela kunye nokusetyenziswa kwi-Photoshop
Ubuncwane | | Iipateni, Photoshop, Izibonelelo
Iipateni o Izizathu zeFotohop zisisebenzela ngemisebenzi engapheliyo Kuyilo. Enye yeendlela zayo "kukunxiba" imvelaphi, njengoko kusenzeka kwifestile yencoko yeapp efana neWhatsApp, ukwenza indawo enokugqunywa ngombala omhlophe osicaba onwabise ngakumbi.
Ngale nto kanye Sizisa inani elifanelekileyo leempawu okanye iipateni ukuze zilingane kolo luvo ujonge ngasemva kwesixhobo okanye iphepha lewebhu uqobo. Ayisosicelo sayo kuphela, kodwa zinokwahluka. Iipateni zomgangatho onokuzikhuphelela umsebenzi ngaphandle kwengxaki kwaye olo luhlu lusuka kwelona lakudala luye kuthi ga ngoku. Kukho ukukhetha njengoko ubona, njenge kweli qhagamshelo Unesixa esikhulu sezixhobo zeFotohop.
1 Iipateni ezincinci
3 I-carbon fiber
4 Ipakethi eblue
5 Ipakethi yePinki yePinki
6 Ipakethe yePoney Honeybear
8 Iinkwenkwezi kunye namabhabhathane
10 Iipateni ezahlukeneyo
11 Iimpawu zemonochrome
12 Izizathu 02
14 Indoda yesigcawu
15 Ifayibha yekhabhoni
16 Iintyatyambo ezahlukeneyo
18 Yiva ngcono
24 Igolide nesilivere
27 Ukukhazimla kwegolide
40 Isangqa sesangqa
42 Isangqa seemodyuli
43 Idayimani edandathekileyo
44 Iidayimani ezingapheliyo
45 Umdlalo wedayimane
46 IHalloween edibeneyo
Ukusuka kwi-Photoshop 7 okanye ngaphezulu, okanye enye uhlobo lweenkqubo zoyilo ezinjengeI Elements 2 okanye i-GIMP, ungasebenzisa ezi patheni ziphantse zincinci.
Siya ku i-70s ngale ndlela yePhothosop. Kuya kufuneka unxibelelane nephethini yosetyenziso lwentengiso.
Isizathu se I-carbon fiber enokusetyenziselwa zonke iintlobo zezakhelo okanye ubume bokuyilwa kwi-3D.
Imivumbo ye-Oblique imibala eyahlukeneyo ebonakala njengephepha lodonga Igumbi lendlu, nangona linolwalathiso lwediagonally.
Ipakethi yePinki yePinki
Njengangaphambili, kodwa nge Iithoni ze-pastel zezinye iintlobo zeempawu kwi-Photoshop okanye enye inkqubo yoyilo.
Ipakethe yePoney Honeybear
Ngomthunzi oluhlaza, kubonakala ngathi amalaphu ahlukeneyo amalaphu etafile ekhitshini okanye kwigumbi lokutyela isivuno esincinci.
Imibala iintliziyo kunye neemilo ezijikeleziweyo eyintsusa kwaye inokusetyenziselwa uyilo lwewebhusayithi.
Iinkwenkwezi kunye namabhabhathane
Este ipatheni ilula kakhulu ukugxila kumbala wegolide kunye nezo butterflies kunye neenkwenkwezi.
Igama elilula kakhulu loku uphawu lombala oluhlaza ngasemva kunye neebhotile ezintle ezinamaphiko.
Iseti ye Izizathu ezi-6 ezahlukeneyo ngemibala emine eyahlukeneyo.
Uthotho lwe Iimpawu ezinemilo yejiyometri Lowo unombono wokuba kumnyama nomhlophe.
Uchungechunge lwe Iimpawu ezahlukeneyo ngemibala kunye neemilo ukusukela kwiintolo, ii icon ukuya kwisikhombisi.
Ezi zizathu zijolise kwiintlobo ezahlukeneyo zeentyatyambo ngemibala eluhlaza, emfusa kunye orenji.
Injongo yile isinyithi kwaye inesiphelo esimangalisayo kwezo webhusayithi okanye imisebenzi enxulumene noomatshini.
Ifayibha yekhabhoni yale motif entle kuzo zombini i-CS2 kunye ne-CS3.
Le patheni isebenzisa ifayile ye- Igradient kunye noluhlu loyilo lwamagqabi kunye ne-aksenti kwigophe elijikeleziweyo kunye nelirhangqiweyo.
Iseti ye Iipateni ezili-12 zeemilo ezahlukeneyo kunye nemibala ukuze ilingane umbono wakho ophambili.
Izizathu ezili-11 ezintsha Ingasetyenziselwa nantoni na oyifunayo kwaye yahlulwe ngokuba "yinyani" ngokubonakalayo.
Un Iphethini yephepha lodonga imacabre encinci, kodwa yahluke kakhulu kubo bonke abanye.
Enye ye Igradient ngombala nge-motif yeentyatyambo.
Un Ipateni enomdla ngobume, nangona iklasikhi ingeyiyo eyangoku.
En luhlaza kwaye bomvu mnyama sihamba nale njongo.
IMonochrome yolunye uyilo olwahlukileyo neemilo ezijikeleziweyo.
Igolide egqibeleleyo kunye nesilivere izimemo zomtshato, imihla yokuzalwa kunye nokunye.
Iimpawu ezinemigca ezingama-25 Ziqala ukusuka kwimibala efana nepesika, luhlaza okwesibhakabhaka, luhlaza, namthubi. Isimahla ukuba isetyenziselwe urhwebo.
Umzekelo dumbbell yeejim ukuba nenjongo elula.
12 x 12 kunye nepateni ezimbini, enye eqinileyo kunye ne-opaque enye. Zingasetyenziselwa ukuthengisa okanye ezobuqu.
Isiphumo soko UBokeh uqhelekile kule mihla kwaye inokusetyenziselwa zonke iintlobo zemali.
Izizathu ilungele ikrisimesi ezisixhenxe kubo kuzo zonke iintlobo zemihlobiso kunye nemisebenzi.
Iipateni zendlela Usuku lwezithandani ngentliziyo entle kwaye intle.
Ngasemva imibala ecacileyo neyahlukileyo.
Kwakhona ngemvelaphi ebonakalayo kunye nemibala eyahlukeneyo.
Esinye isincomo esinokuphuhliswa kweentyatyambo esekwe kwi- iifoto zelace ka-Queen Anne.
Ezinye izizathu Yenziwe kakuhle kwaye inomdla ngemibala. Zizonke zingama-20.
Iipateni ebizwa ikofu ngazo zonke iintlobo zezizathu njengewebhu okanye iphepha lodonga.
Izizathu izifinyezo zale patheni inomdla Ukubetha kakhulu ngenqaku lokufakelwa.
ukuba Ubusuku beHalloween ezi motifs zigqibeleleyo zizonke zizintandathu.
Kucacisiwe esi sizathu I-Photoshop ilungele ukuwa.
Iipateni uyilo olukhulu lwe-Retro ngombala wegolide.
Igridi elubala for motif ring isilivere.
Imibala emi-3 yemotif ukufihla okugqibeleleyo kwiiwebhusayithi zomkhosi.
Uyilo olukhulu lwefayile ye- setyhula enombala omhlophe, luhlaza okwesibhakabhaka namnyama.
Rhombus ngokungathi zazipeyintwe ngebrashi emhlophe kunye nomnyama.
Lula le motif nge Iithayile zepateni ezi-5.
Iiseti ezi-3 zeethayile ipateni yedayimane.
Imivimbo ediagonal zonke iintlobo zemibala eqaqambileyo YeHalloween.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iipateni » Ngaphezulu kweempawu ezingama-46 zamahhala (iipateni) zokukhuphela kunye nokusetyenziswa kwi-Photoshop
Ukucofa umfanekiso ngamnye kule posi http://blueblots.com/freebies/500-truly-useful-resources-of-free-high-quality-patterns/ unokuzikhuphelela iifayile ezimbalwa de ugcwalise ngaphezulu kwama-500.
Phendula kuG. Berrio
Kuya kufuneka ubagcine kule ndlela kwikhompyuter yakho
C: \_ Iifayile zeNkqubo \_ iAdobe \_ Adobe Photoshop CS3 \_ Presets \_ iipateni
Kwaye emva koko ubakhangele kwinkqubo
Andazi ukuba ndizikhuphelele njani izizathu!
Ndiyathemba ukuba iya kuvela, kuba iphepha lilunge kakhulu kwaye bendifuna ukukhuphela ezinye izinto
bulisa oogxa bakho!
Tere Renteria sitsho
Iziphumo ezipholileyo kakhulu, enkosi ngokwabelana
Phendula kwiTere Renteria
UMnu meselshop sitsho
molo balunge kakhulu mae oozwilakhe ngakumbi izinto ungomnye unyana wonyana
Phendula Mnu Misaelshop
Izizathu zilungile kakhulu, enkosi, ndiyayixabisa kweli phepha ,;)
Ndilifumana iphepha lakho linomdla kakhulu, kodwa ndizamile ukufaka ezinye ii-amotives kwi-photoshop cs5 kwaye andikwazi. Ndiziguqula njani ezi fayile ukuba zenze pat.
Ndisakopa ii-motifs kodwa zikwifomathi ye-jpeg emva koko ndiziguqulela kwifomathi ye-pat kuba kungenjalo azinakulayishwa kwi-phothosp ndisebenzisa i-cs4 ultra, nceda undincede
Molo Si kunye noWer,
Iifayile ziyimifanekiso evezwe, kodwa ayizizo iipateni zeFotohop.
Uyilo olunokubekwa amaxesha ngamaxesha njengoko ufuna ukwabizwa ngokuba ngumzekelo, ukufezekisa uyilo oluqhubekayo ...
U-Esztre NSN! sitsho
Umhlobo olungileyo undikhonze kakhulu.
Phendula u-Esztre NSN!
ndicofa phi ukuzikhuphela?
Umbuzo, ndine-adobe c6 (entsha) kwaye ivula kuphela iipateni zepat, kwaye into endikhuphelileyo yile .abr, ndingavula njani ulwandiso? Akuncedi nto ukuyifaka kwifolda
Iifayile .abr ziibrashi kunye neempawu motifs .pat
Iifayile zokukhuphela iipateni zezinye .jpg, ndiziguqulela njani kwiPat? Ndinefotohop cs2 kwaye ukuba ayibazi. Enkosi
Enkosi ngawe, igalelo lakho elikhulu, le bendiyifuna
yehla ngolwandiso lwe-gif okanye jpg = (ngoba?
UAmelia Pizarro sitsho
Ngoku ungazisebenzisa zonke izibonelelo zethu ngaphandle kokunikezelwa kwaye unokuzikhuphelela izibonelelo kunye nebheji * Esi sishwankathelo kwaye asinasiqinisekiso sesivumelwano. Ngolwazi oluthe kratya, jonga iMigaqo yokuSebenzisa ngaphambi kokusebenzisa umxholo.
Phendula u-Amelia Pizarro
Izizathu ezilungileyo kakhulu, enkosi
Imizobo yedijithali yeentaka yokukhuphela simahla